Dowladda Qadar oo gargaar Caafimaad geysay Hargeysa - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Dowladda Qadar oo gargaar Caafimaad geysay Hargeysa
Dowladda Qadar oo gargaar Caafimaad geysay Hargeysa
May 16, 2020 admin306
Garoonka diyaaradaha Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland ayaa Maanta oo sabti waxaa ka degtay diyaarad sida qalab Caafimaad oo looga talagalay Cudurka halista ah ee Coronavirus oo saameeyn ku yeeshay aduunka oo dhan.
Diyaaradaan ayaa waxaa ay ka timid wadanka Qatar, waxaana la sheegay inay wado qalab Caafimaad oo ay Qatar ugu deeqay Soomaaliland, kuwaas oo isugu jira kuwo looga hortagayo Cudurka Coronavirus iyo kuwo lagula tacaalayo.
Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland ayaa deeqda Caafimaad kula wareegya Garoonka diyaaradaha Hargeysa ee Cigaal, iyagoona u mahadceliyay Qatar, sidoo kalena sheegay in Gargaarka uu kusoo aaday xili loo baahan yahay.
Soomaaliland ayaa kal hore waxaa qalab Caafimaad ugu wareejiyay Imaaraadka Carabta, iyadoona halkaas laga helay 87 ruux oo qaba Cudurka halista ee COVID-19, waxaana ugu geeriyootay 8 qof.
Sanbaloolshe: ” Qadar waa Wadanka Kaliya ee Xiriir la leh Alshabaab”
Jen. Galaal oo ka hadlay Wadahadalada Galmudug iyo Ahlu sunna